आज माघ ९ बिहीबारको राशिफल – तपाईको भाग्य कस्तो रहनेछ ? हेर्नुहोस् – Hamrosandesh.com
आज माघ ९ बिहीबारको राशिफल – तपाईको भाग्य कस्तो रहनेछ ? हेर्नुहोस्
मेष (चू,चे,चो,ला,लि,लू,ले,लो,अ) ः समयमा काम सम्पादन नहुँदा निरासा छाउँनेछ । बन्द व्यापारमा मन्दि आउँने तथा आर्थिक संकटको सामाना गर्नु पर्नेछ । कष्टकर यात्रा नहोला भन्न सकिन्न । सवारी साधन तथा भौतिक सम्पत्तिको प्रयोग गर्दा ध्यान दिनुहोला । अध्ययनमा मन नजाँदा अरुभन्दापछि परिनेछ । आफन्त तथा घरपरिवारका मानिससँग मनमुटाव सिर्जना हुने योग रहेको छ ।
वृष (ई,ऊ,ए,ओ,वा,वी,वू,वे,वो) ः भौतिक सम्पत्ति तथा विलाशी वस्तुको व्यापार व्यवसायबाट मनग्ये आम्दानी गर्न सकिनेछ । व्यावसायकै सिलसिलामा लामो दूरीको यात्राको तय गर्न सकिनेछ । माया प्रेमको गाँठो कसिलो भएर जानेछ भने जीवनसाथीको सहयोगले राम्रा काम गर्न सकिनेछ । मन परेको मानिसबाट उपाहार तथा भौतिक सम्पत्ति हात पार्न सकिनेछ । बौद्धिकताको प्रयोगमार्फत् अधिकार स्थापित गर्न सकिनेछ ।
मिथुन (का,की,कू,घ,ङ,छ,के,को,हा) ः व्यापार लगानी गरी मनग्ये धन आर्जन गर्न सकिनेछ भने साझेदारी व्यावसायबाट मनग्ये धन आर्जन हुनेछ । व्यापारकै सिलसिलामा लामो दूरीको यात्राको तय हुनेछ । भौतिक सम्पत्ति तथा विलासी सामान उपहारको रुपमा प्राप्त हुनेछ । पढाइ लेखाइमा प्रतिस्पर्धीहरु आफैँ किनारा लाग्नेछन् । माया प्रेमको डोरी कसिलो भएर जानेछ । नोकरीमा प्रवेश तथा पदोन्नतीको गतिलो योग रहेको छ ।
कर्कट (ही,हू,हे,हो,डा,डी,डु,डे,डो) ः शत्रुमाथि विजय गर्न सकिनेछ तथा आँट, शाहस, हिम्मतले कामहरु सम्पादन हुनेछन् । अध्ययनमा एक कदम अगाडी बढी नतिजा हात पार्न सकिनेछ । पुराना ऋण तिर्न सकिने तथा रोग केही भए विषेक हुनेछ । मामा मावली पक्षसँग बिग्रेका सम्बन्ध सुधार हुनेछ । पछिसम्म आम्दानी भईरहने व्यावसाय सुरु गर्न सकिनेछ । प्रेमको डोरी कसिलो हुनेछ ।
सिंह (मा,मी,मू,मे,मो,टा,टी,टू,टे) अध्ययन तथा अध्यापनमा मन नजाँदा महत्वपुर्ण उपलव्धिहरु गुम्न सक्छ, ध्यान दिनुहोला । प्रेममा रमाउँन चाहनेहरुका लागि समय मध्ययम रहेको छ । व्यापारमा लगानी गर्नको लागि केही समय पर्खनु राम्रो हुनेछ । भौतिक सम्पति तथा उपाहार प्राप्तीको योेग भएपनि टरेर जानेछ । स्वास्थ्यमा समस्या आउँन सक्छ ध्यान दिनुहोला ।
कन्या (टो,पा,पी,पू,ष,ण,ठ,पे,पो) ः राजनीति तथा सामाजिक काममा समय दिएपनि न्यून उपलव्धिमा चित्त बुझाउँनु पर्नेछ । व्यापार व्यवसायमा भनेजस्तो नाफा नभएपनि कृषि तथा पशुपालन व्यवसायबाट भने मनग्ये धन आर्जन गर्न सकिनेछ । पढाइ लेखाइमा मन नजाने हुनाले अरुभन्दा पछि परिनेछ । आमा तथा परिवारका सदस्यहरुसँग मनमुटाव सिर्जना हुनेछ । माया प्रेममा धोका हुनेछ ।
तुला (रा,री,रु,रे,रो,ता,ती,तू,ते) ः आँट, शाहस तथा पराक्रमा वृद्धि भएर जाने हुनाले उपलव्धिमुलक कामहरु गर्न सकिनेछ । न्यायिक निर्णयहरु तपाईकै पक्षमा आउँनेछन् भने विवाद तथा प्रतिष्पर्धामा तपाईको नाम अग्र स्थानमा आउँनेछ । लेखन कला तथा साहित्यमा बाकि रहेको कामलाई पूर्णता दिन सकिनेछ । प्रेममा रमाउँने चाहनेहरुलाई लागि समय उत्तम रहेको छ ।
वृश्चिक (तो,ना,नी,नू,ने,नो,या,यी,यू) ः बोलेको कुरा पुर्याउन नसक्दा सहकर्मी तथा आफन्तबाट तपाईको आलोचना हुनेछ । पढाइ लेखाइमा आत्तिने बानीले नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्न मुस्किल पर्नेछ । परिवारका साथ मिष्ठान्न भोजन ग्रहण गर्ने अवसर जुरेपनि खानपानको तालमेल नमिल्दा स्वास्थ्यमा समस्या आउँनेछ । प्रेममा केहि असन्तुष्टि मिलाउँदै बढ्न सकिनेछ । व्यापारमा मन्दि आउँनेछ ।
धनु (ये,यो,भा,भी,भू,ध,फा,ढा,भे) ः आफ्नो दैनिक काम समयमा सम्पादन गरी बचेको समय समाजसेवामा खर्चन पाईने हुनाले मान सम्मान पाईनेछ । ईच्छाशक्ति बढ्ने तथा कृतिमानी काम गरी नाम तथा दाम दुवै कमाउँन सकिनेछ । प्रेम तथा मित्रताको बन्धन कसिलो हुने तथा जीवनसाथीको सहयोग पाईनेछ । पढाइमा मन जाने तथा नतिजा आफैँतिर ल्याउँन सकिनेछ ।
मकर (भो,जा,जी,जू,जे,जो,ख,खी,खू,खे,खो,गा,गी) ः खानपानमा ध्यान नदिँदा स्वास्थ्य सम्बन्धि समस्या बढ्न सक्छ, ध्यान दिनुहोला । आफ्नै कमजोरीले विवाद तथा प्रतिस्पर्धामा अरुभन्दा पछि परिनेछ । शुभचिन्तक तथा आफन्तलाई वेवास्ता गर्दा दुःख पाईनेछ । मन परेको मानिसबाट टाढिनु पर्दा मन खिन्न हुनेछ । न्याय संगत काम नगर्दा दण्ड तथा जरिवाना हुने योग रहेको छ ।
कुम्भ (गू,गे,गो,सा,सी,सू,से,सो,दा) ः शुभचिन्तक तथा परिचित व्यक्तिबाट सहयोग जुट्नाले काम गर्न सहज हुनेछ । कार्यक्षेत्रमा राम्रो काम गरी नाम तथा दाम दुवै कमाउँन सकिनेछ । पुर्खौली धन तथा सम्पत्तिको प्रयोगमार्फत् मनग्ये लाभ लिन सकिनेछ । पुराना विवादलाई सल्टाउँन तपाईको महत्वपुर्ण भुमिका हुने तथा लोकप्रियता चुलिनेछ । अध्ययनमा मन जानेछ ।
मीन (दी,दू,थ,झ,ञ,दे,दो,चा,ची) ः समाज तथा समुदायको हितमा काम गर्न सकिने हुँदा ईज्जत प्रतिष्ठामा वृद्धि भएर जानेछ । खोजिमुलक क्षेत्रमा लगानि बढाउँदा भनेजस्तो सफलता हात पार्न सकिनेछ । प्रेममा रमाउँन चाहनेहरुका लागि समय उत्तम रहेको छ । पढाइ लेखाइकै सन्दर्भमा लामो दूरीको यात्रा हुनेछ । धार्मिक तथा आध्यात्मिक क्षेत्रमा समय लगानी गरि अरुको सेवा गर्ने अवसर जुर्नेछ ।